Saturday May 09, 2020 - 11:46:40 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Warbixin rasmi ah oo soo baxday ayaa sheegaysa in dad ka badan 20.5 Malyan oo qof ay shaqadooda waayeen muddo bilood gudahood oo kaliya.
Dhaqaalayahannada Americanka ah waxay sheegeen in shaqa la'aantan ku habsatay dadka Mareykanka mid lamida ay dhacday waqti hadda laga joogo 90 sanadood, wargeyska Wall Street Journal ayaa warbixin uu daabacay ku sheegtay in heerka baaga muundada Mareykanka ay gaartay 14.7%.
Donald Trump oo tacliiqiyay musiibada dalkiisa ku habsatay ayaa sheegay in dhibaatadan ay aheyd mid lafilayay tan iyo markii uu dilaacay caabuqa Covid19 balse wuxuu saadaaliyay in sida ugu dhaqsiyaha badan loogasoo kabsan doono.
Dhinaca kale kumanaan kun oo ruux American ah ayaa shalay oo kaliya udhimatay Carona Virus, 1743 ruux ayaa maalintii jimcaha dhimasho loo diiwaan geliyay.
Dhimashada guud ee Carona uu ka geystay dalka Mareykanka ayaa gaartay 78,200 oo ruux waana tiro aad uga badan saadaashii uu horay usameeyay Trump, Mareykanku waa dalka koowaad ee caalamka ladhiban caabuqa Covid19.